Dhallaanka dalka ku cusub oo aan suurtagal u helin dugsiyada sare - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Warqadda shahaadooyinka imtixaannada. sawir: Sawirlw: Jessica Gow/TT
Dhallaanka dalka ku cusub oo aan suurtagal u helin dugsiyada sare
La daabacay torsdag 29 september 2016 kl 12.32
Waxaa dhammaan kor u kacaya tirada dhallaanka suurtagalka u hela iney dugsiyada sare galaan, marka laga reebo koox un.
Kooxdaasi ayaa ah dhallaan dalka ku cusub, isla-markaana aan la garaneyn wax tacliin ah oo ey horey u soo dhigteen. Kuwaasina oo kolka la isku geeyo ay 3,6% ay suurtagal u noqoto iney helaan shahaadooyin ey ku geli karaan dugsiyada sare.
"Mid lala yaabo maahan in adeyda dalka dhowaantan timid aaney ku guuleey-san sidii ey ku gaari lahaayeen heerka shahaado ee dugsiyada sare lagu galo, waa marka laga baxo dugsiyada hoose/dhexe. Iyo in muddo bilo ah kolka dalka lagu sugnaado lagu guuleeysto shahaadooyin maaddooyin badan ee ka mid ah kuwa ardeydu dhigato si ey dugsiyada sare ugu gudbaan", sida ay qoraal saxaafadeed ku sheegtay Anna Österlund, ahna madaxa laanta wax-barashada ee dhallaanka dalka ku cusub u qaabil-san hayadda maamulka iskuullada - Skolverket.
Tira-koobka wakaaladda maamulka iskuullada ayaa muujinaysa iney dhallaanka tacliintooda aan la xaqiijin karin ee dalka ku cusub, dhigtana fasallada sagaalaad ay tiradoodu kor uga kacday 1 000 gaartayna 5 400 sannadka kolka loo barbar-dhigo sannadkii ina dhaafay.
Kolka loo barbar-dhigo sannadkii 2015 ayey tirada dhallaanka dhigata dugsiyada sare kor u kacday 0,9%, marka laga reebo dhallaanka dalka ku cusub. Hase yeeshee kolka lagu daro dhallaanka dalka ku cusub ee ku guuleeystay shahaado lagu geli karo dugsiyada sare ay tiradaasi hoos u dhacday 2,5%. Isla-markaana hoo uga dhacay 85,6, gaareyna 83,1%.
"Tira-koobka ayaa muujinaysa in dhallaanka dalka ku cusub ee iskuullada hoose/dhexe ku bilaaba wakhti dambe ay aad ugu adag tahay sidii ay uga guul gaari lahaayeen tacliinta lagu galo dugsiyada sare. Iyadoona loo baahan yahay sidii loogu fidin lahaa taageero dheeri ah oo ey ka helaan dawladda, sida ay sheegtay Anna Österlund.